App si ay ula socdaan fariimaha qoraalka ah IPhone Free
exactspy-App si ay ula socdaan fariimaha qoraalka ah iPhone Free wax walba oo aad u baahan tahay basaasayeen qalab shakhsi. SMS tracking waa adeeg lagama maarmaan by exactspy-App si ay ula socdaan fariimaha qoraalka ah iPhone Free iyo waxaad ka heli kartaa content buuxda oo fariin kasta (Xilka ama soo gelaya) iyada oo software this. Waxaa ee qaadku waxay ku siinaysaa qaataha ama soo dirtay warbixin ku leh farriin kasta, weheliyaan taariikhda iyo wakhtiga.
exactspy-App si ay ula socdaan fariimaha qoraalka ah iPhone Free yimaado kula a 5 lacag maalin asaasiga ah ee dhabarka iyo in ay dhacdo, aadan ku qanacsanayn, waxaad ka heli kartaa soo celiyo. Si kastaba ha ahaatee, noocan ah oo xaalada weligay abuuray lahaa sida aad ka heli doontaa macluumaadka fledge buuxda oo fariin text for mobile aad ninkeeda. Waxaa runtii waa aalad kuriga qayru nooc kasta oo arrimaha aad maskaxda. Waxaad ka heli kartaa si buuxda u helaan textbox iyo waxa jiri kara Wax qarsoon aad ka soo sinaba.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay helitaanka qaab ay u qalab aad rabto inaad ka soo basaasaan oo ay dhacdo of iPhone, Reserved waa loo baahan yahay ka hor inta. Waxaa si sahal ah lagu rakibay karo iyo waxaad ka heli doontaa macluumaadka oo dhan si aad u nidaamka. Bixinta qadar yar si aad u hesho fariimaha qoraalka ah ee mobile ninkaaga ee ma aha wax weyn ka iyo exactspy-App si ay ula socdaan fariimaha qoraalka ah iPhone Free Waa bartii ugu wanaagsan ee loo sameeyo.
Sidee si ay ula socdaan fariimaha qoraalka on iphone 5
Iyadoo exactspy-App si ay ula socdaan fariimaha qoraalka ah iPhone Free waxaad awoodi doontaa inaad si:
Waxaad Download karaa :”How To Spy By App To Track Text Messages iPhone Free ?“
App si ay ula socdaan fariimaha qoraalka ah IPhone Free, App si ay ula socdaan fariimaha qoraalka ku android, App si ay ula socdaan fariimaha qoraalka telefoonka kale, Sidee si ay ula socdaan fariimaha qoraalka ku 4s iphone, Sidee si ay ula socdaan fariimaha qoraalka on iphone 5